Zvakanakira kudzoka kune zvakajairwa | Bezzia
Zvakanakira kudzoka kune zvakajairwa
Nyamavhuvhu yakafanana ne Dzokera kubasa kune vamwe uye kudzokera kuchikoro kune vamwe. Iva sezvazvingaite, ndiwo mwedzi umo vazhinji vedu tinodzokera kutsika uye marongero ayo zhizha akatiita kuti tikanganwe. Uye kunyangwe zvingave zvakaoma kwatiri kuzvibvuma, kudzokera kuchimiro kune zvakwakanakira.
Kudzokera kubasa mushure mezhizha chinhu icho vazhinji vedu tinosangana nehusimbe. Vamwe kunyangwe vaine kushushikana kana kushushikana kana mamiriro ari mumabasa avo asina kunaka. Zvisinei, kunze kwezviitiko zvekupedzisira izvi, zvakanakira kudzoka kune zvakajairwa zvakakosha. Uye ndiko kuti kudimbura, kuzorora uye kukanganwa zvirongwa zvedu chinhu chinodiwa asi zvinongobatsira chete nekuda kwechimiro chenguva pfupi.
Wanga wakamira kwenguva yakareba here? Zvichida kuti munguva idzodzo iwe wakaratidza kukosha kwekumisikidza zvidiki zvetsika uye marongero ekudzivirira kutambura nekushushikana nekushushikana. Zvakanakira kudzoka kune zvakajairwa Varipo mushure menguva yezororo uye vane chekuita ne ...
2 Mukana wega
3 Hupenyu hwepanyama uye hwepamoyo
Mahoridhe ari kupokana neodha. Iwo mavhiki atinotora mukana wekuti tirege, kuzorora, kushamwaridzana…. uye isu tinozvizadzisa izvi nekufamba kunzvimbo dzakasiyana, kumuka mushure menguva dzose, kudya panguva dzisina kujairika, kutora kurara kwenguva refu uye / kana kunonoka kurara.
Hatisi kuti hazvina kunaka kuzviita; chinja magariro edu nekurara kwevhiki kana vhiki mbiri zvinogona kubatsira. Nekudaro, pavanogara kwenguva refu, kubva pakunzwa kwerusununguko tinoenda kune yekushayikwa kwekudzora. Inonyanya kukosheswa muvana uye nevanhu vakura kwazvo vanowanzo shatirwa.
Tsika dzakanaka ndidzo dzinoita kuti kushaikwa kwekutonga kusave chinhu chinotikuvadza. Nekuti zvinoratidzwa kuti rarama nenzira yakarongeka: kuremekedza nguva dzehope, nguva dzekudya, kudya zvine hutano, kuva nemisungo yakati uye nguva yekunakirwa, zvinogara zvichibatsira.
Pakati pemwedzi waGunyana, makumi matatu muzana ematanho akanyoreswa pagore kuSpain anoitika. Taneta nekuverenga iyi nhau gore rimwe nerimwe munhau uye zvakadaro isu tiri kushamisika. Isu tinozviita kunyangwe hazvo zvisiri zvechienzi kwatiri kana zvakaoma kunzwisisa kuti sei zvakadaro. Uye ndizvo zororo rinoshandura nzira yakajairika yekurondedzera.
Munguva yezororo tinopedza maawa akawanda nemumwe wedu, vana, mhuri kana shamwari. Hupenyu hwemagariro hunowedzera uye isu tinowanzo takomberedzwa nevanhu nguva dzese, tichinyangarika nzvimbo iyoyo pachedu iyo inodikanwa zvakadaro. Kudzokera kune zvakajairwa kunoreva kuitazve uye kusiyanisa hukama hwedu, chimwe chinhu chinogara chichibatsira.
Hupenyu hwepanyama uye hwepamoyo
Tichifunga nezve mabhenefiti atakambotaura, hazvishamise kuti pakati pezvakanaka zvekudzokera pane zvakajairika kugadzikana kwedu kwepanyama uye kwepamoyo. Kurarama hupenyu hwakarongeka kunobatsira kune ese ari maviri. Tinodya panguva dzakakodzera, tinodya zvine hutano uye muzviitiko zvakawanda, isu tinodzosera maitiro ekurovedza muviri, iyo inokumbira kuvandudzwa kwemuviri. Uye iko kuvandudzwa kwemuviri nenzira isingadzivisiki kwakabatana kune yemanzwiro.
Muitiro wacho unotimukirawo kunzwa kwekutonga. Tinonzwa takachengeteka uye takadzikama kana tichiziva zvekuita uye nezvatinotarisira mukati mezuva. Hazviitike kwauri here, mukuwedzera, kuti neyakajairika zvinoita, iwe unoparadzira mamwe mazuva? Kunzwa kunopa, sekudzoreredza nzvimbo yedu, kuhupenyu hwedu hwepamoyo.
Kudzokera kumuitiro kunobatsira, kunyangwe hazvo zvakaoma kuzvitenda, ichangosvika kubva kuzororo, handiti? Nyanzvi dzezvepfungwa dzinogara dzichikurudzira kuti tisamhanyise mazuva edu ezororo nekudzoka kumba mazuva mashoma tisati tatarisana netsika. Nekudaro isu tichava nemazuva mashoma ekudzosera maitiro ezuva nezuva, tichijairira zvese muviri wedu nepfungwa kwatiri. Kana iwe unofunga izvi hazvidi kudzidziswa? Kushungurudzika, kusagadzikana uye kusagadzikana kunogona kuve zviratidzo zvekurohwa kamwe kamwe neiyo nyowani kana yekare (zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei) chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Zvakanakira kudzoka kune zvakajairwa
Yakareba eyelashes, ungavawana sei nematanho akapusa?
Kusurukirwa kunokwanisika here muvaviri?